Sidee baan u sameeyaa backlinks websaydh adoon helin kuwa lacagta qaata?
Haddaad rabto inaad dib u abuurto boggeeda halkii aad si dhakhso ah u heli lahayd qaar ka mid ah kuwa lacagta bixiya - waxaa laga yaabaa inaad horey u qaadatay go'aan fiican. Aynu wajahno - codsashada xariirka ganacsiga ayaa mararka qaarkood u muuqda inuu yahay dadaal aad u ballaaran. Dhab ahaan, si kastaba ha ahaatee, in ay jiraan fursado badan oo aad wax u geysan karto waxyeelo dheeraad ah oo ku saabsan horumarkaaga hadda, halkii aad ka faa'iideysan lahayd wax kasta oo la qiyaasi karo iyo joogteyn ah ee gaadiidka, CTRs, isbedel, iwm. Wax walbaa waa in Google hadda uu xooga saarayo in uu bixiyo kaliya tayada dhismayaasha tayada iyo dabiiciga ah. Waxa loola jeedaa in la abuuro backlinks websaydhka saxda ah ee aad ku qasban tahay inaad maalgaliso wakhti iyo dadaal si aad u soo jiidato kaliya boggaga internetka ee saddexaad iyo blogyada. Waa hagaag, fikradda casriga ah ee tayada iyo dhismaha xiriiriyaha organic midna maaha mid fudud oo sahal u socda sida loo isticmaalo, tusaale ahaan, labo ama saddex sano ka hor. Kuwani wakhtiyadii hore ee wanaagsanaa way dheeraadeen. Maalmahan, waxaad si guul leh u abuuri kartaa boggaga internetka oo keliya marka la isticmaalayo qorshooyinka ficil ee dhabta ah, si waafaqsan istaraatiijiyada guud ee SEO si joogto ah dib u eegis iyo dib-u-hagaajin danbe. Laakiin weli ma jirto wax walwal ah - halkan waxay ku imaaneysaa dhowr siyaabood oo loo isticmaalo si loo helo xiriiro tayo leh. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan inaad ku maal-gashato wakhti iyo dadaal - adoo ah inaadan ka mid ah kuwa aan-ku-gacmaha-gacmuhu ahayn - iyo profile-kaaga ayaa la dhisay oo dhan. Inkasta oo qaar ka mid ah talaabooyinka soo socda ay u badan tahay in aysan qaadan wax ka badan dhowr daqiiqo si aad u hesho wax walba, meelahooda ugu weyn ee lagu hagaajinayo SEO-gaaga marnaba lagama qiimeeyo. Sidaa darteed, hoos ku yaal qaar ka mid ah siyaabaha ugu sarreysa ee aan u abuuro boggaga - si dabiici ah, karti iyo dabcan adigoon bixin lacagta dayn.
Ka hel Macluumaadka Tayada ee Siinaya Qiime
Si cad, soo jiidashada dalxiisayaal dheeraad ah oo leh macluumaad gaar ah oo tayo leh oo tayo leh oo leh qiimo dhab ah ayaa laga yaabaa inay noqoto qaabka ugu fiican ee loo abuuro bogga si caadi ah, iyo iyada oo aan khatarta ah in la helo rigoore ah. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad bixiso nuxurka bogga (maadooyinka adag, barashada kiisaska, iwm. ) si ay dad badan uga qaybqaataan, isku xiraan, una sheegaan meelo kale Webka. Sidaa daraadeed, tixgelin inaad qayb ka mid ah qoraallada qoraalka ah ee qoraalka ah si aad u aragto waxyaabo badan oo la fahmi karo iyo indhaha, sida qoraallada waxtarka leh, falanqaynta xisaabta, barashada kiiska gaaban, jaantusyada, iwm. Wanaagsan, ma jirto wax khalad ah oo ku jahwareeraya kuwa ku tartamaya tartamayaasha wakhtigooda si ay u bartaan wax badan oo ku saabsan waayo-aragnimada guuleysiga ee isku xirnaanta. dhisida si aad u hagaajisid dadaalkaaga dheeraad ah sida ugu macquulsan. Ha ka waaban inaad isku daydo inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabka internetka ee caanka ah ee loogu talagalay cilmi-baarista dib-u-eegista iyo falanqaynta ee helitaanka furan. Aniga ahaan, waxaan ka helay qaabdhowrahan soo socda oo faa'iido leh si ay u helaan aragti qiimo leh oo qiimo leh - Moz's Open Site Explorer (Moz), Falanqeeye Heer Xumo ah (Semalt), Qaylo-dhaanta Qurbaha SEO. Wax waliba si fiican ayuu u shaqeyn karaa. Kaliya tixraac kuwa horay loo soo sahmiyay ee ugu sareeya PageRank iyo ilaha awooda maamulka si ay u abuuraan dib u celin boggaga ama blogka adiga kuu gaar ah.
Inaad haysato nuxur adag si aad u soo saarto dabeecadaha tayada dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo adoo adeegsanaya isku-duwahaaga si aad ugu soo celisid guulaha ugu fiican ee faa'iidadaada kuu gaarka ah - waxay noqon laheyd weyn laakiin wali kuma filna. Sidaa daraadeed, iska hubi in aad si adag u shaqeyn kartid oo kaliya dhisida gadaashooda, laakiin waa awooddaada awooddaada iyo wacyigelinta dadweynaha. Tixgeli wareysi aad u sareeya oo ku saabsan xirfadlayaashaada, soo jiidashada dhagaystayaal balaadhan oo ku saabsan muusikada caanka ah ee caanka ah, fidinta sawiradaada ugu wanaagsan ee aad ka heshid boggaga mawduucyada iyo maqaallada martida, iyo sidoo kale bixinta faallooyin caqli leh oo feker leh si ay ugu raaxaystaan ​​kuwa ku habboon ee dib u soo noqda Source .